बागमतीमा इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्दै, सहमति बाहिरिएपछि कम्युनिस्टहरुमा भुकम्प! - Media Dabali
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका प्रमुख तीन दलबीच वागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे भएको लिखित सहमति बाहिरिएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुअघि भएको लिखित सहमतिमा आधा अवधिपछि कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ ।
पाण्डे मुख्यमन्त्री भएको आठ महिना पुगिसकेको छ । संघीय सरकारले मंसिरमै आमनिर्वाचन गराउने तयारी थालेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको विपदमा सरकारले लज्जास्पद काम गर्यो, कांग्रेस नेता बानियाले गरे तीन सय त्रिपाल दिने घोषणा
बागमतीमा कांग्रेसले कम्युनिस्टलाई औकात देखाइदिने, कुपण्डोलमा कांग्रेस सांसदहरूको गोप्य बैठक
मकवानपुरमा एमालेभित्र ठूलो पहिरो, लोकप्रिय नेताहरू कांग्रेसमा प्रवेश, बानियाँद्वारा स्वागत
कांग्रेस बागमती प्रदेशका नेता बानियाँले तीन सय विपन्न परिवारलाई हस्तान्तरण गरे राहत
हेटौडामा पौडेल समुहको लज्जास्पद हार, इन्द्र बानियाँले देखाए कमाल !
मकवानपुर जिल्ला सभापतिमा यी हुन् दाबेदार, इन्द्र बानियाको समर्थन कसलाई ?
बुधवार, पौष १४ २०७८०२:५३:०१